comme-un-pro.fr ले यस वेबसाइटलाई समयमै अद्यावधिक राख्ने काम गर्छ। यदि, तथापि, तपाईंले कुनै समस्या वा पुरानो डेटाको सामना गर्नुभयो भने, तपाईंले हामीलाई थाहा दिनुभयो भने हामी यसको कदर गर्नेछौं। कृपया वेबसाइटमा तपाईले गलत जानकारी पढ्नु भएको ठाउँमा संकेत गर्नुहोस्। हामी यसलाई सकेसम्म चाँडो हेर्नेछौं। कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउनुहोस् ई-मेल मा: tranquillus.france@comme-un-pro.fr.
हामी अयोग्य वा कमिहरुबाट हुने घाटाका लागि जिम्मेवार छैनौं, न त क्षतिहरूको लागि वा इन्टरनेट मार्फत जानकारीको प्रसारमा अन्तर्निहित समस्याहरु, जस्तै अवरोध वा अवरोधका लागि। वेब फारमहरू प्रयोग गर्दा, हामी कम्तिमा पनि अनिवार्य क्षेत्रहरूको संख्या राख्नको लागि हर प्रयास गर्छौं। यस वेबसाइटको माध्यमबाट / या- द्वारा सुरु गरिएको डाटा, सल्लाह वा विचारहरूको प्रयोगको नतिजाको रूपमा भोग्नुपरे कुनै नोक्सानको लागि, আরম্ভ हुन-प्रो-एफआरआरले कुनै जिम्मेवारी लिदैन।
वेबसाइट र यसको सबै कम्पोनेन्ट्स (फोरम सहित) को प्रयोगको विषय हो प्रयोगका शर्तहरु। यस वेबसाइटको केवल प्रयोगले ज्ञान र प्रयोगको यी सर्तहरूको स्वीकृति जनाउँदछ।
ईमेल र वेब फार्म प्रयोग गरेर बुझाइएको व्यक्तिगत जानकारीका लागि प्रतिक्रियाहरू र अनुरोधहरूलाई पत्रको रूपमा व्यवहार गरिनेछ। यसको मतलव तपाईले हामीबाट पछिल्लो एक महिना भित्र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्न सक्नुहुनेछ। जटिल अनुरोधहरूको स्थितिमा, हामी तपाईंलाई एक महिना भित्र सूचित गर्नेछौं यदि हामीलाई अधिकतम months महिना चाहिन्छ भने।
तपाइँको प्रतिक्रिया वा जानकारीको लागि अनुरोधको अंशको रूपमा तपाइँले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको कुनै पनि व्यक्तिगत डेटा हाम्रो गोपनीयता कथनको साथ मात्र प्रयोग हुनेछ।
init-un-pro.fr वेबसाइटहरूको सामग्रीको लागि सबै जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दछ जसबाट वा जसबाट हाइपरलिंक वा अन्य सन्दर्भ बनाइएको हो। उत्पादन वा सेवाहरू तेस्रो पक्षहरू द्वारा प्रस्ताव गरिएका ती तेस्रो पक्षहरूको लागू सर्त र सर्तहरूको अधीनमा छन्।
यस वेबसाइटको सामग्रीमा सबै बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारहरू init-un-pro.fr को सम्पत्ति हो।
यी कागजातहरूको प्रतिलिपि, वितरण र कुनै अन्य प्रयोग निषेध गरिएको छ यदि सुरुको अनिवार्य नियमहरू (उदाहरणका लागि अधिकार) द्वारा तोकिएको हदसम्म बाहेक, सुरु-अनु.प्र.आर. को लिखित प्राधिकरण बिना, यसको विपरित स contrary्केत बाहेक। सामग्री।
यदि तपाईंसँग साइटको पहुँचका साथ कुनै प्रश्न वा समस्याहरू छन् भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।